संसदीय समिति कसको इशारामा चल्छ ? लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गलत « Dainiki
संसदीय समिति कसको इशारामा चल्छ ? लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गलत
२८ जेठ, काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन निर्णय कानूनसम्मत नभएको बताइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ विपरीत समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । अहिले गरिएको विज्ञापनले केही हदसम्म भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्ने आँकलन गरिएको छ । रासस
प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०७:२९
३२ साउन, पर्वत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले आफ्नो
संविधान संशोधनको शर्तमा दुई तिहाइ पुर्याउन सत्तामा गएका हौँः मन्त्री यादव
३२ साउन, गाेरखा । समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी
नेकपा सचिवालय बैठक आइतबारकाे लागि सर्याे
३२ साउन, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक भोलि आइतबारका लागि सारिएको छ
३२ साउन, काठमाडौँ । तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च